'संविधान संशोधन गराउनका लागि उपेन्द्र यादव सरकारमा गएका हुन्'
प्रदेश नम्बर दुईमा राजपा–फोरमबीचको सरकार ५ वर्ष चल्छ
वास्तवमा मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ । तर बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन गरेन । प्रदेशलाई स्वायत्तता दिदै विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेटले त्यसो गर्न सकेन । देशमा संघीयतालाई जोगाउने किसिमको बजेट आएको छैन । गरिबीलाई अन्त्य गर्ने र प्रदेशका समस्या समाधान गर्नका लागि बजेटमा केही पनि समावेश गरिएको छैन । संघियतामा गएपछि पनि सघीय सरकारले नै सबै काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको के काम ? मुलक संघीयतामा जानुको औचित्य के ?
देउवाको उतारचढावपूर्ण तीन कार्यकाल
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ओली बुधबार बैंकक जाने
देउवाका सामू चुनौती
मंसिर २१ गते हुने रोचक भिडन्तहरु, चितवन प्रचण्डको कारण चर्चामा